मन्त्री खतिवडाका कारण सिंगो मन्त्रिपरिषद् कोरोना संक्रमणको जोखिममा, स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित – Ktm Dainik
२०७९ असार २३ बिहीबार
दार्चुलामा तुइनबाट खसेर १८ वर्षे युवक बेपत्ता, खोजी कार्य तीब्र बनाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीसमक्ष आयोगको प्रस्ताव: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिर २ गते गरौँ
१० दिन अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन, निर्दोष भए शर्मा पुन: अर्थमन्त्रीमा दोहोरिने
इन्धनको मूल्य बढेसँगै वायूसेवा सञ्चालक संघले बढायो हवाईभाडा
सीसीटिभीको क्षमता कति हुन्छ, मलाई के थाहा : शर्मा
अर्थमन्त्री शर्माले रोष्टमबाट घोषणा गरे राजीनामा
यी हुन् अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिमा रहेका ११ जना
अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न एमालेका चारसहित ११ सदस्य भएको संसदीय समिति गठन
भगवानको फोटो भएको पत्रिकामा बेरेर मासु बेचेको आरोपमा एक जना पक्राउ
मन्त्री खतिवडाका कारण सिंगो मन्त्रिपरिषद् कोरोना संक्रमणको जोखिममा, स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
मन्त्री खतिवडाका कारण सिंगो मन्त्रिपरिषद् कोरोना संक्रमणको जोखिममा, स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित
बुधवार, वैशाख ३ २०७७
काठमाडौँ – काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका आमा र छोरामा कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भएसँगै उक्त संक्रमणको लहरो मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि तानिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमित फेला परेका उक्त अपार्टमेन्टमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि सहभागी भएको खुलासा भएसँगै सिंगो मन्त्रिपरिषद् नै जोखिममा रहेको आशंका व्यक्त गरिएको हो ।
सनसिटी अपार्टमेन्टमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका छोरा तिलक खतिवडा पनि परिवारसहित बस्दै आउनुभएको छ । उहाँ सनसिटी अपार्टेन्टमा हालै भएको निर्वाचनमा सचिव पदमा उम्मेदबार बनेर विजयीसमेत हुनुभएको थियो ।
चैत आठ गते निर्वाचन भएपछि छोराको विजयोत्सव समारोहमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री खतिवडा चैत ११ गते सनसिटी अपार्टमेन्टमा पुग्नुभएको त्यहाँ बस्ने कलाकार पुष्कर रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार मन्त्री खतिवडा झण्डावाल गाडीसहित अपार्टमेन्ट पुग्नुभएको र झण्डै एकघण्टापछि फर्कनुभएको थियो ।
. राजदूत खतिवडाले भने – एमसीसी अनुमोदनको वैकल्पिक तरिका खोजिन्छ
. खतिवडा मेक्सिकोका लागि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त
. खतिवडा कोष्टारिकाका लागि पनि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त
. ओली नै अप्ठ्यारोमा परेपछि, राजिनामा दिन बाध्य भए खतिवडा !
. मन्त्रीपरिषद् बैंठकमा चर्चा, ‘अर्थमन्त्रीलाई कोरोना लाग्योकी क्याहो !’
बेलायतबाट फर्केका संक्रमितहरुको परिवारसँग अर्थमन्त्रीका छोरा तिलकको पर्याप्त हेलमेल भएको स्थानीय बताउँछन् । त्यसपछि बुवासँग सम्पर्क भएको र यसरी संक्रमितको लहरो मन्त्री खतिवडा र उनी हुँदै अन्य मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि पुगेको छ । मन्त्री खतिवडाले सनसिटीबाट फर्केपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा अन्य अवसरहरुमा धेरैपटक अन्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएका कारण सिंगो मन्त्रिपरिषद नै जोखिममा रहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
तर सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री खतिवडाले यसबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । बरु आफ्ना निकट व्यक्तिहरुमार्फत सत्य लुकाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उहाँको आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुको साटो अर्थमन्त्रीले चुप लागेर बस्नु चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो ।
यता कानुनका जानकारहरुले भने अर्थमन्त्री खतिवडाले गम्भीर सामाजिक अपराध गरेको बताएका छन् । सरकारले सिंगो मुलुक लकडाउन गरेको र आफै सभा सम्मेलन तथा भीडभाड नगर्न निर्देशन गरेका बेला मन्त्रीबाटै त्यसको उलल्लंघन हुनु कानुन विपरीत रहेको कानुनविद दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो । उहाँले कानुन सबैका लागि बराबर भएकोले यसको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनभुयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडा ११ चैत्रको साँझ ४२ मिनेट सनसिटीमा बसेको खुलासा (भिडियोसहित)
कोरोना भाइरसका दुईजना संक्रमित भेटिएको सनसिटी अर्पाटमेन्टमा ११ चैत्रमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पुगेको खुलेको छ । उनी पुगेको रेकर्ड सनसिटीको लोकेन्द्र केसीले राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडा ११ चैत्रको साँझ ५:१३ मा प्रवेश भएको र ५:५५ मा निस्केका थिए । उनको बा २ झ ३७३३ नम्बरको झण्डावाला गाडी थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । तर, अर्थमन्त्रीले प्रेय संयोजकमार्फत् आफू नगएको दाबी गर्दै आएका छन् । अर्पान्टमेन्टको कमिटिका सदस्य पुष्कर रेग्मीले मन्त्री खतिवडा त्यहाँ ११ चैत्रमा पुगेको पुष्टि गरेका थिए । ८ चैत्रमा त्यहाँ कमिटिको चुनाव भएको थियो । उनले भने, ‘चुनाव भएको दिन उहाँ आउनुभएको थिएन ।’ उनले थपे, ‘११ चैत्रमा उहाँ आउनुभएको हो ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाको दुई देखि तीनसम्मको अर्पाटमेन्ट रहेको जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमित भेटिएका अर्पान्टमेन्टमा अर्थमन्त्री खतिवडा पुगेपछि पनि उनी मन्त्रिपरिषद बैठकमा नियमित सहभागी हुँदै आएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका छन् । मन्त्री क्वार्टर पुलचोकमा खतिवडा बस्छन् । मन्त्री खतिवडा छोरा तिलक खतिवडा र परिवारलाई भेट्न पुगेका थिए । केसीले खतिवडा छोरा भेट्न आएको सत्य हो भने । खतिवडाले पनि टेष्ट गराउनुपर्ने जरुरी भएको बताए ।
कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएपछि सनसिटी अहिले शिल्ड गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा सम्पर्कमा पुगेकाहरुको खोजी भइरहेको छ । खोजीका क्रममा मन्त्री खतिवडा पुगेको रेकर्ड भेटिएपछि उनी ढाँट्दै आएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले टेष्टको दायरा बढाइरहेको छ । सम्पर्कमा पुगेकाहरुको पनि टेष्ट र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगेको विषय लुकाउन खोजेकै बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यस्ता किसिमका सूचना लुकाएर नराख्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाशुदेव पाण्डले यस्ता सूचना लुकाएर राखे व्यक्ति परिवार समाज र राष्ट्रकै लागि कठिन हुने बताउनुभयो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका मन्त्रीहरुले लकडाउनको सामान्य उल्लंघन गरेको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको खबर हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । तर नेपालमा लकडाउन जारी रहेका बेला मन्त्रीबाटै त्यसको गम्भीर उल्लंघन हुनु र सिंगो मन्त्रिपरिषद् नै जोखिमको आशंकामा रहने कार्य हुँदा समेत संलग्न मन्त्रीको कुनै जवाफ आएको छैन ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, वैशाख २५ २०७७ ११:५२:४४
यी हुन् भारी मतान्तरले विजयी भएका सासंदहरू
अघिल्लो सं‌सदीय निर्वाचनमा पराजित भएका २५ चर्चित नेताहरूको नालिबेली
झापामा १३ वर्षीया बालिका माथि बलात्कार !
प्रहरीको तथ्याङ्क भन्छ : ‘नेपालमा दैनिक ६ जना बलात्कृत हुन्छन्’
खनाल भन्छन्: प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्री र पार्टीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ
अर्थमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार (तस्बिरहरू)
श्रीमतीमाथि डाक्टरको ‘कर्तुत’ : करणीबाट बच्चा जन्मिएपछि सुत्केरी अवस्थामा बलात्कार, पुनः गर्भ बसेपछि मार्ने प्रयास !
पत्रकारिता र ‘पार्टीकारिता’
साउदी अरेबियमा एक महिनादेखि अड्कियो राईको शव
हत्या गरेर ह्युम पाइपभित्र शव फाल्ने एक महिलासहित तीन जना पक्राउ
नेपाल प्रहरीमा खुल्यो २,४७४ जवान र ४४३ असईको लागि जागिर